musha > Rovedza Kufamba Matipi > The Best Places To Kupemberera Gore Idzva
The Blog iri pamusoro nzvimbo kupemberera Gore Idzva mumagadzirirwo aine chitima rwendo kuti kufarira guta renyu European ive chisingakanganwiki chando zororo. Ungave uchitsvaga usiku kudanana tsika, munhu zvinoshamisa mafayawekisi kuratidzira kana veboka gore, isu iwe akafukidzwa. Sarudzai yenyu European kuenda vanakidzwe yekudyidzana zvikuru yakasiyana Gore Idzva kupfuura iwe nokusingaperi ndisati. Here is our list of top places to celebrate New Year’s – and you can reach them all by train!
New Year’s is a magical time to visit Florence, Itari. Florence ane rakasiyana ezvinhu panguva ino uye svikika nechitima. Nakidzwa yakarongwa mapato, da kunodya zvinenge panze, ari pyrotechnical anoratidza kuti akwezve kubva zvose pamusoro Europe iri tarisiro zviuru zvevanhu kuti usiku yavo asingakanganwiki. Visitors can also go to a concert in Piazza Della Signoria or Piazza Pitti, apo vaimbi nomukurumbira akafanana Alessandro Mannarino uye Irene Grandi vanoda kuita.
Florence ari kufarira nzvimbo vanhu panyaya achirira muna New Year uye wanga kamwe ikoko, muchaziva sei.
Berlin nzvimbo kupemberera Gore Idzva
Kutandara Germany guta nokuti New Year uye vanakidzwe ayo nyika-kirasi Nightlife Chiitiko. Berlin is a busy rail hub in northern Germany and luckily there are regular trains that run throughout the country to neighboring pasi rose maguta.
Berlin is one of Europe’s hotspots panguva Gore Idzva. liveliness kwayo uye siyana zviitiko manheru vari risingaenzaniswi. Nokuti manheru chaiwo, urongwa pamusoro partie paSuo Brandenburg apo pane nyanzvi mafayawekisi anoratidza. Mukuwedzera, pane Kazhinji DJs mhenyu uye zvokudya inomira magazini remarudzi siyana cuisines.
Kana uri kutsvaka kumwe zvikuru da, ipapo Paris ndiyo nzvimbo kupedza Years New. Enda Eiffel Tower uye uone kuratidza vezviedza kwemvura. Regai kurasikirwa kunoshamisa chiedza zvinoratidza kuti yapera kubva 11:30 ndiri panguva yakakurumbira shongwe nenziyo zvakakwana uye migumisiro kuti usiku uchaita haazombokanganwi.
Kana dai nani kupedza manheru mumba, bhuku chisvusvuro maviri panguva imwe yenharaunda Parisian Restaurants kana nakidzwa mumwe zhinji mhenyu zvesimba kuti run munguva New Years. With wandei nezvitima kuna Paris kubva yose France, uyewo usiku hwese uye soro-nokukurumidza nezvitima kumaguta akasiyana akawanda, kusvika Paris nokuda New Year Evha ane kumbobvira nyore saka.
London – The yakanakisisa nzvimbo kupemberera Gore Idzva
New Year’s Eve in London is always an extraordinary experience. You will be spoilt for choice with the kuko zviitiko kuti utore nzvimbo muLondon munguva iyi gore. Kubva pokuona mafayawekisi kuti párty panguva Hottest London mbariro netsvimbo, pane chinhu huenderane wose. uri kana kushanyira kubva pedyo kana kure neguta, pane zvizhinji European nezvitima kuti anogona kutora kuti London.
Amsterdam nzvimbo kupemberera Gore Idzva
Amsterdam nderimwe European guta rakanaka chakakomba bato rose gore, asi kana pava New Year Evha, hakuna nzvimbo saicho. With wandei mukuru-nokukurumidza omunharaunda uye akareba nezvitima uye kubva Amsterdam, chaizvoizvo chiri guta nyore kusvika rails.
Ita nguva hwako sezvo iwe kubatanawo ndibatsireiwo mapato kuti teura kunze vapinde dzomuguta. Watch fireworks light up the sky throughout the evening and hit their peak at midnight to match the growing celebrations.
Barcelona – The wokupedzisira yedu mazita nzvimbo kupemberera Gore Idzva
Barcelona iguta nakisisa kushanya chero nguva yegore asi panguva Gore Idzva zvomumhepo pane yemagetsi. Most nembariro netsvimbo, uye kunyange maresitorendi kuronga zvimwe muchimiro New Year Evha mhemberero kuti yemanyorero anomanyira mumavambo ngwanani. Vanhu vakawanda vanosarudza kupedza manheru yakanaka Beach vamwe Outdoor mhemberero, zvingangoita kuti kubatwa kuti zvinoshamisa firework kuratidza kumativi pakati pousiku. Ungave uri kufamba kubva Paris, Zurich kana imwe nyika yokuEurope, iwe haungaiswi aina nokuda kutakura sezvo pane nezvitima dzakawanda kuti amhanyire Barcelona.
Wati akapedza New Makore mune rimwe guta European? Let us know your favorite place that you have visited during this time by tweeting us at @SaveATrain! kana Enda Save A Train paIndaneti kuti tarisa Exclusives zvedu zvose fares uye kutanga kuronga yako inotevera ushingi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-best-places-to-celebrate-new-years/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)